कहाँ हराउँछन् वर्षेनी महिला ?
कहाँ हराउँछन् वर्षेनी महिला ?
२०७६ भदौ २६ बिहीबार १४:२२:००
बितेका ३ वर्षमा रोल्पा जिल्लाबाट १६० महिला हराए । यसरी हराएकामध्ये प्रहरीको मद्दतमा ९५ जना फेला परे भने अझै ६५ जना बेपत्ता छन् । हरेक वर्ष किन यति ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरु हराउने गर्दछन ? हराएकाहरु कसरी फेला पर्छन् ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५६ जना महिला हराए । यसरी हराएका महिलामध्ये ४१ जना मात्रै फेला परे । त्यस वर्ष हराएका ८ जना भेटिएनन् । आव २०७४/७५ मा हराएका ५५ मध्ये ५० जना फेला परे भने पाँच जना फेला पर्न सकेन । गएको आवमा ५६ जना महिला हराए । हराएकामध्ये ४ जना मात्रै फेला परे । बाँकी ५२ जना अझै फेला पर्न सकेको छैन ।
हराएकाहरुका अभिभावकले दिएको सूचनाका आधारमा खोजी गर्न देशभरका प्रहरी युनिटहरुलाई हुलियासहित जानकारी गराउने गरिएको छ । हुलियाकै आधारमा प्रहरीले हराएकाहरुलाई फेला पर्ने गरेको छ । हराएकामध्ये ठूलो सङ्ख्याका महिलालाई प्रहरीले काठमाडौँका ईंटा भट्टामा फेला पर्ने गरेको छ । ईंटा भट्टामा काम गर्ने गाउँकै नाइकेले ललाइफकाई लैजाने भएकाले अधिकाँश महिला परिवारलाई जानकारी नदिई भाग्ने गरेको पाइन्छ । राम्रो लाउने, मिठो खाने लहडमा दलालको जालमा फसेर परिवारका सदस्यलाई जानकारी नै नदिई भाग्नेको सङ्ख्या ठूलो रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।